Inona no dikan'ny zana-tsipìka ao amin'ny Skype? - Skype
Tena > Skype > Midika ny sary Skype - ny torolàlana farany
Midika ny sary Skype - ny torolàlana farany
Inona no dikan'ny zana-tsipìka ao amin'ny Skype?
tranokala mahazatra hotmail
Fampifandraisana miafina 32 ao amin'ny fitendry anao Efa nieritreritra momba ny tsiambaratelo nafenina ao amin'ny solo-sainao ve ianao? Toy ny vao haingana toy ny 20 taona lasa izay, ny tena mandroso ordinatera nanana fiara mafy fahafahan'ny 320 megabytes ary izany no heverina ho lehibe eo amin'ny PC teknolojia fandrosoana tamin'izany fotoana izany. Betsaka ny zavatra niova nanomboka tamin'izay. Saika tsy mampiasa totozy intsony izahay ary aleontsika touchpad sy touchscreens.
Fa ny Keyboard no hany zavatra izay toa tsy niova. Ity ny lisitry ny rehetra ny hotkey tsikombakomba izay azo antoka fa avy amin'ny mora raisina. Tsy maninona na mpampiasa Windows na OS X ianao.
Aoka isika hanomboka amin'ny Windows 23 fitendry sy ny tsikombakomba miafina. Voalohany, tadiavo ny lakilen'ny Windows. Matetika eo amin'ny tsipika farany amin'ny fitendry izy io.
Havia ny spacebar. Nahita azy ve? Lehibe. Ity bokotra ity dia ampiasaina amin'ny fitambaran'ireto manaraka ireto.
Noho izany, ny rantsan-hanao fotsiny izany. Eny ary, andao handeha. Combination # 1 Ny fanindriana fotsiny ny bokotra Win dia hampakatra ny menio Start.
Ao amin'ny Windows 8.1 teo aloha dia hanokatra varavarankely W. Combination # 2 Press the Win key followed by A.
Ao amin'ny Windows 10, hisokatra ny Action Center. Ny Action Center dia manome anao fidirana haingana any amin'ny sehatr'asao. Mora! Fitambarana # 3 Ny fitambaran'ny fanalahidy Win sy ny lakile B dia mifantina ny marika voalohany amin'ny faritra fampandrenesana.
Azonao atao ny mifamadika amin'ireo marika miaraka amin'ny bokotra arrow. Kitapo # 4 Win key plus Ctrl key arahin'i B. Ity fiarahana ity dia miova amin'ny Program izay mampiseho hafatra vaovao ao amin'ny faritra fampandrenesana mandrosoCombination # 5 Tsindrio ny bokotra Win sy ny C keys.
Ao amin'ny Windows 8 sy 8.1, ny Fitaka Bar no miseho. Misokatra amin'ny Windows 10 i Cortana, saingy raha mampiasa fiteny tohana ianao.
Tokony hiasa tsara ny teny anglisy. Fitambarana # 6 Mahasoa izany raha te hampihena ny fikandrana misokatra rehetra eo noho eo ianao. Vao avy namely ny Win fototra nanaraka ny D manan-danja ianao ary mahita ny biraonao ao mivaky faharoa.
Mitambatra # 7 Manome haingana ny fidirana amin'ny Windows Explorer. Ho an'ireo izay manery ny bokotra Win sy ny fanalahidy E, Windows 10 koa dia manokatra ny bara Quick Launch amin'ny toerana misy anao. Fitambaran'ny # 8 ny Win manan-danja sy manan-danja F nanery miara-manokatra 'Tadiavo antontan-taratasy sy ny lahatahiry'.
Ao amin'ny Windows 10, manokatra ny Hub Feedback izy io. Mitambatra # 9 telo fanalahidy: Win Ctrl key Plus Plus F misokatra 'Find Computer' Eny ary, inona no manaraka? Ny fitambarana # 10 Fahazoana manan-danja miampy G fanalahidy Miasa amin'ny fomba samihafa amin'ny kinova Windows samihafa, ao amin'ny Windows 7 sy Vista dia entiny any alohan'izay ireo gadget rehetra izay miasa ankehitriny. Ao amin'ny Windows 10 izany dia hanokatra ny lalao bar.
Te hilalao? Ankehitriny fantatrao ny fomba hanaovana izany haingana. Fangaroana # 11 Tsindrio ny bokotra Win and K. Hipoitra ny New Start Menu - Fifandraisana amin'ny Windows 8 sy 8.1 Raha te hanova ny mpampiasa ianao na hidio haingana ny toeram-piasana dia ampiasao ny fitambarana # 12.
Tsindrio fotsiny ny Win fototra nanaraka ny L (Fitiavana) ary dia hanao izany ho anao ny manao. Tsy tianao izany hotkey iray hafa miaraka fa ianao ho mampiasa isan'andro azo antoka. Ny fitambarana # 13.Ny bokotra Win sy M dia mampihena ny varavarankely rehetra Ny kombina # 14 dia hanampy amin'ny famerenana ny fandresena farany ambany Tsindrio fotsiny ireto lakile 3 ireto: Mandresy, miova ary M - ary eto ianao.
Fitambaran'ny # 15 amin'ny Win sy ny fanalahidin 'O miaraka manidy ny fironana ny fitaovana sy ny atsahatry ny gyroscope asa eo amin'ny takelaka. Mitambatra # 16. ve ianao amin'ny fampiasana ny ivelany na ny fandefasana Monitor? Tsindrio avy eo ny bokotra Fandresena arahan'ny fanalahidy P ary manova ny fomba fiasa.
Tsy miasa afa-tsy amin'ny Windows 7 sy vaovao kokoa. Inona ny manaraka? Mitady zavatra ao amin'ny solosainao ve ianao? Ary mampiasa ny fitambaran'ny # 17 ny fanalahidy Win sy Q. izany manokatra ny fikarohana famosaviana rehetra nametraka fampiharana ao amin'ny Windows 8 sy vaovao.
Mitambatra # 18 manokatra ny 'Run' diniky boaty ho anao. Tsindrio fotsiny ny Win fanalahidy sy ny R manan-danja ary avy eo dia mifidy ny fandaharana na fampiharana izay te-run.Combination # 19 Fanalahidy ⊞ Win sy T mifamadika ny fifantohana amin'ny rafitra lovia.
Izy io dia miasa amin'ny Windows 7 sy vao haingana ihany. U mijoro for Utility Noho izany, fitambaran'ny # 20 ny Win sy U fanalahidy manokatra ny Utility Manager ho anareo. Ve dia mila mampiasa ny fanamarihana na ny sary? Tsindrio ny bokotra Win ary W, ary manokatra ny Windows Ink W orkspace izy.
Tena mora ampiasaina! Ny fitambarana # 22 Win key arahin'i X dia manokatra ny Windows Mobile Application Center. Izany ihany no miasa ho an'ny solosaina finday Windows Vista tany sy 7 ary ny farany ho an'ny Windows.Win miaraka manan-danja sy manan-danja Y dia hanomboka Yahoo! Messenger ho anareo raha ny nametraka, mazava ho azy.
Woohoo! Isika nanao ny Windows fitendry. Ry mpampiasa Mac, mbola miaraka aminay ve ianao? Ianao izao no anjaranao! Ireto misy kombina matanjaka sivy izay ho tianao! Andeha isika hanomboka! Variana Websites? Tsindrio miaraka amin'ny zana-tsipìka miakatra ny lakilen'ny baiko ary avy eo dia hihodina mankany am-piandohan'ny pejin-tranonkala rehetra. • Na izany aza, raha te hidina ianao dia tsindrio ny bokotra baiko arahin'ny zana-tsipika ambany ary ho eo amin'ny farany ambany amin'ny pejin-tranonkala ianao. • mitambatra 3 dia hanampy anao amin'ny horonam-boky amin'ny alalan'ny teny diso tsipelina na inona na inona taratasy misokatra.
Vao gazety didy sy ny semicolon. Ary andao handeha! • Ny lakilen'ny Command izay arahin'ny 1 na 2 na 3 dia mitondra anao mora foana amin'ireo takelaka misokatra rehetra anananao ao amin'ny fitetezanao. Command miampy 1 mitondra anareo ho any amin'ny voalohany kiheba, didy miampy 2 handray anareo ho any amin'ny faharoa, sy ny sisa.
Tsotra, sa tsy izany? • Hitsin-dàlana fitendry No. 5 Safidy ary hamafana Ity hitsin-dàlana fitendry mahasoa ity dia mamafa ny teny iray isaky ny mandeha fa tsy litera iray isaky ny mandeha. Izany rehetra miasa manerana an'i OS X, na ianao na fanoratana TextEdit Ny fanoratana tranonkala ao an-navigateur ny URL bar. • fitambarana # 6 Te hanafina ny varavarankely misokatra rehetra tsy ho haingana amin'ny fampiharana izay miasa ankehitriny? Tsindrio fotsiny ny lakilen'ny Command izay arahin'i H. • Ny fitambarana # 7 dia mpamonjy voina raha manidy varavarankely tsy nahy ianao ary tsy mahatadidy ny URL.
Press ny didy, Shift sy T miaraka fanalahidy sy ny farany mihidy vakizoro eo amin'ny navigateur dia hanokatra avy hatrany. • mitambatra # 8 mitambatra Mandidia sy ny G3 fanalahidy, fampiharana ny varavarankely rehetra dia esorina avy amin'ny fomba fijery ary afaka hijery mitora eo amin'ny biraonao. Raha te hampiseho ny fampiharana anao indray dia tsindrio fotsiny ny bokotra.
Ary ny fitambarana isa 9 an'ny Option miampy Shift plus Volume Up na Down dia mora ampiasaina indrindra rehefa manandrana mahazo ny haavon'ny output anao eo ambony na hidina amin'ny fitaovana kely kokoa ianao. Aza adino ny mizara an'ity lahatsoratra ity amin'ny namanao - mila mahafantatra koa izy ireo! Tsindrio ny bokotra 'J'aime' etsy ambany ary kitiho ny 'Subscribe' raha hiaraka aminay eo amin'ny lafin'ny fiainana!
Ahoana no ahafantaranao raha misy olona miresaka amin'ny Skype amin'ny olon-kafa?
Ity misy ohatra iray amin'ny faribolana volomparasy miaraka amin'nyzana-tsipìkakisary: ​​Toy ny teboka volomparasy eo akaikiny, itydia midika hoefa ny olonamananany fampiasa Out Of Office dia navadika. Izany koadia midika hoeilay olonadiaivelan'ny aterineto, ka Azo inoana izy ireodiaTENA ivelan'ny birao.13 Sep 2016
Salama daholo, miresaka momba ny fisolokiana an-tserasera tato ho ato aho. Niresaka momba ny fitaka am-pitiavana tato ho ato aho, amin'ny ampahany satria ny sariko be dia be izay mety ho fantatrao fa nampiasaina tamin'ireny hosoka vehivavy tia fitaka ireny tamin'ireny raharaha fitiavana sandoka ireny izay matetika niteraka ny sasany tamin'ireo mpisoloky ireo. vola be any. Efa reko avy ireo niharam-boina tamin'ny toe-javatra izay izay no anaovany ny sary izy ireo dia matoky sy maharesy lahatra ny iray efa nisy fotoana, rehefa nahita ahy amin'ny lahatsoratra tao amin'ny Skype sy very hevitra ahy nandritra ny fotoana kelikely aho, satria mazava ho azy fa tsy hasianao teny akory izany ireo niharam-boina tamin'ny skype ka raha te hitady fomba hakana lahatsoratra aho izay mety ho hitanao amin'ny internet sy hampiasa skype dia tiako ho fantatra hoe ahoana marina no hanaovana an'io ka nanao fikarohana kely aho androany, fitaovana iray hitako Androany dia nantsoina hoe manycam andman ycam aho azoko antoka fa tena manana tanjona lehibe tokoa izy io, tanjona amin'ny fampianarana sns. fa ity dia iray amin'ireo fitaovana maro izay mety ho azo ampiasaina amin'ny scam toy izany, ary mifanaraka amin'izay tiako 'Ve re avy niharam-boina ny fametrahana ny zavatra toy izao fotsiny mba hanome anareo hevitra kely mamaky teny sy manoratra Tamin'io fotoana io mikasika ny fomba fantatrao toy izao, fitaovana io dia azo ampiasaina raha mahita ny lahatsoratra voalohany, ary misy rehetra karazan-dahatsoratra samihafa momba ahy an-tserasera, indrindra ity amin'ny f izay mety ho azonao tokoa ny anankiray ho karazana UTI ao anatin'ny iray Jereo karazana efijery Webcam kalitaon'ny karazana lahatsoratra ity tranga manokana.
Raha ny marina aho miteny tsara teo amin'ny efijery na any amin'ny iray tsy mahazatra mpanatrika raha mijery ny lahatsoratra tena mba misintona ity lahatsoratra ity, maro ireo fitaovana azonao ampiasaina mba télécharger lahatsoratra avy ao amin'ny aterineto, ka Keepvid tena malaza ohatra. Mampiasa ny mpanova clip aho ary ny fomba nametrahako izany dia azonao atao tsara amin'ny tranokala ity saingy manana azy io ho toy ny chrome extension mba hahafahanao misintona lahatsoratra eo ambanin'ireo lahatsoratra manokana jerenao eo amin'ny tranonkala ka alaina ao ilay izy. ny birao ary tena mora be izy izao, izao dia natsofoka tao anaty kams maro ny loharano fampidirana ka mety ho fakan-tsary marobe fa koa fantsona haino aman-jery ary apetrako eto amin'ny rakitra media ary efa manana ny lahatsoratra voatahiry ao amin'ny biraonao fotsiny mba ho mora kokoa eto sy ankapobeny izany no nanangana sy cued tsara sy raha te ankapobeny hanao izany aho, fa fotsiny hanao zavatra toy ny Skype na Google Hangouts na zavatra toy izany Call ka mandehana mankany amin'ny Skype toe-javatra aho izay Mampiasa Mac aho, mety ho hafa kely amin'ny PC izany, mandehana any amin'ny Audio-Video dia ho hitanao fa afaka manova fakantsary ianao mba hahafahanao misafidy Manycam ho fakantsary Ameraso ahafahanao miverina avy amin'ny fakantsary lozisialy ho any ny iray mampiasa aho amin'izao fotoana izao, na ny amin 'ny virtoaly amera amin'ny maro fakan-tsary sy ny zavatra rehetra tsy maintsy atao eto raha mandeha aho ao Skype aho, ny sarimihetsika no loharano ary afaka mahita ny lahatsoratra tena haingana. Ankehitriny izany dia tsy nampihetsi-po, satria aho tao amin'ny lahatsoratra amin'ny chat, fa afaka mahazo ny mihevitra fa ahoana no mety miasa, nefa mety ho tena mandresy lahatra, rehefa manao zavatra toy izany, fa fantatrao ary fa karazana nanao ahy miato, satria fantatrao Azonao atao ny milaza, fantatrao tsara raha vao nahita ny sasany tamin'ny lahatsoratra mazava ho azy fa ity olona ity fa mieritreritra aho fa tena toless lehibe ity satria mieritreritra aho fa misy fomba maro hamitahana nomerika ary fantatrao, indrindra rehefa miresaka ireo fitiavana ireo mangalatra, izany indrindra n toe-javatra, na dia izaho tsy miteny ao amin'ny lahatsoratra izay mazava ho azy fa tatitra, indraindray dia hataony hoe ny aterineto dia tsy tena tsara toy izany ny teny dia mety tsy ho any, na ny lahatsoratra dia mety ho faty tena haingana nvinze sasany ireo niharam-boina aza dia lavitra kokoa, noho izany dia kely fotsiny ny webliteracy anio ary manantena aho fa afaka mizara izany amin'ny hafa ianao ary hahafantaran'ny olona fotsiny fa io no karazana zavatra mitranga ary toa zavatra mahazatra tokoa io fa tena mety hahazo anao ny mpisoloky hanao ny mieritreritra fa izy ireo olon-kafa ve ka tandremo ny tenanao
Inona no teboka mavo hoe amin'ny Skype?
Rehefa mahita nyMAVOmari-pamantarana ho an'nySkypefifandraisana, fantatrao fa napetraka any Away ny satan'izy ireo. Ity famantarana ity dia metyfanahyfa ny fifandraisana dia tsy nihetsika nandritra ny fotoana iray ary mety lavitra ny solosaina, na ny fifandraisana dia nametraka ny satan'ny hoe Away.
Maro amintsika miasa Teams lavitra amin'ny Microsoft. Efa mba nanontany tena ve ianao hoe inona no tadiavin'ny lehibenao momba ny andro fiasanao? Ohatra, ny habetsahan'ny fotoana lany amin'ny asa tena. Aoka hojerentsika. (Hira fifaliana) Okay, ka niditra tao amin'ny foiben'ny mpandrindra Microsoft 365 aho.
Eto dia hasehoko anao izay karazana fampahalalana ny mpitantana izany dia mahazo ary inona no atao hanesorana ireo avy amin'ny rafitra. Ekipa manana ny fanoloran-tena Admin foibe. Andeha horaisintsika izany alalan'ny fitanisana azy rehetra, ary mandeha any amin'ny Admin Teams foibe.
Andeha isika hijery ny tatitra isan-karazany misy anao. Misy tatitra isan-karazany eto amin'ny fanadihadiana sy ny tatitra. Ohatra ny fampiasana ny fampiharana.
Andao handeha amin'ny 30 andro farany ary hampandeha ny tatitra. Hitantsika eto ireo karazana fampiharana isan-karazany ampiasaina ao amin'ny Teams. Amin'ity tranga ity, misy fampiharana Microsoft efatra sy fampiharana roa hafa.
Ity fampahalalana ity dia tsy avy amin'ny mpampiasa fa amin'ny ankapobeny. Mba hahafahantsika mahita fa misy mpampiasa mavitrika roa mampiasa Trello, misy mpampiasa mavitrika efatra ampiasainay ekipa sns. Nefa tsy afaka mahita izay iray eto izahay mpampiasa nampiasa io fampiharana io.
Andao hiverina amin'ny tatitra nataontsika. Raha miantso ny orinasa ao an-toerana ny drafitra, dia afaka mahazo vaovao momba ny isan'ny mpampiasa minitra no lany miantso sy ny vola lany ny antso amin'ny alalan'ny tatitra mandeha ireny. Jereo ny fampiasana Fitaovana ao amin'ny Teams hahitanao izay karazana fitaovana ampiasain'izy ireo hahatongavana any amin'ny Teams.
Na Windows, Mac, iOS, Android sns. Ahoana ny fampiasana ekipa? 'Andeha isika hanao tatitra ity ka jereo izay no mahazo. Ka eto izahay dia manana ny lisitry ny ekipa samihafa ary afaka mahita ny isan'ny hafatra napetraka ao anaty ekipa iray, firy ny valiny, hafatra maika, fanehoan-kevitra, firesahana ary fivoriana izay nalamina tao anatin'ny ekipa.
Raha izao Tsindrio eo amin'ny ekipa eto, ianao, dia hahita ny mpikambana rehetra ao amin'ny tarika ary raha tsindrio eo amin'ny mpikambana iray manokana ianao dia hianatra bebe kokoa momba ny asa atao ao amin'ny ekipa. Izany, ohatra, dia olona roa fivoriana ary hasainy. Teo ambany Call History ianao dia afaka mahita ny antso fa io olona io dia toy ny ao.
Azonao atao ihany koa ny mahita ny faharetan'ny ny antso sy ny mpandray anjara, ka raha fotsiny tsindrio eo amin'ny azy, ohatra, hitako iza izany fivoriana dia, ny faharetan'ny ny antso eto, ary manana bebe kokoa ara-teknika momba ny fitaovana nampiasainy hifandray ary koa ny adiresy IP sns. Andao hiverina amin'ny tatitra momba ny fampiasana isika ary hijery hoe iza isika eto ambany amin'ny asan'ny mpampiasa avy amin'ny ekipa. Rehefa mihazakazaka ato aho ny tatitra dia mahazo topy maso momba ny totalin'ny hafatra fantsona, mamaly hafatra sns, fa eto kosa dia manana ny anaran'ny olona sy ny asan'izy ireo ao amin'ny Teams.
Ka firy ny hafatra fantsona nalefan'ny olona tsirairay. Mamaly hafatra, mandefasa hafatra, hafatra amin'ny chat, fivoriana amin'ny totaliny. Ka eto dia an'ny mpampiasa fa tsy manerantany intsony.
Firy ny antso niarahan'ny tsirairay, ny feon'ny audio, ny fotoanan'ny lahatsoratra, ary ny fotoana fizarana lamba sy ny hetsika farany fanaon'izy ireo. Tsy manana timestamp io, ny datin'ny hetsika farany nataony fotsiny. Eny ary, ka izany no fanazavana ianao dia afaka mahita ny mpampiasa, ankehitriny dia efa teny manokana voalaza eto dia ny ekipa ihany.
Fa ahoana ny amin'ireo fampiharana hafa? Mahazo fampahalalana bebe kokoa isaky ny olona ve isika? Andao hiverina any amin'ny foibe fitantanana Microsoft 365 isika. Andao hojerentsika ireo tatitra. Eto isika dia manana ny vokatra Rating.
Izany dia eo amin'ny sehatry ny fandaminana ihany. Ka ny lazainy eto dia tsy misy isa omena isaky ny mpampiasa. Ity dia fomba tsara iray hampitahana ny fikambanananao amin'ny benchmarkan'ny namana.
ajanony ny fanondroana index
Izany dia midika hoe ho rava ihany koa ny sokajy samihafa, fa izany rehetra izany no ao amin'ny sehatry ny fandaminana. Andao isika handeha hampiasa ary hijery izay azontsika eto. Ireo tatitra mampiseho ny fomba ny olona ao amin'ny orinasa 365 dia mampiasa ny tolotra.
Raha miboridana aho dia afaka mahita ny isan'ny mpampiasa mavitrika mampiasa serivisy microsoft 365 ary hitako izany amin'ny alàlan'ny serivisy dia afaka mahita ireo fampiharana microsoft 365 aho fa ankapobeny indray ity. Koa izao no fandaminana amin'ny ambaratonga. Tsy afaka mahita mazava tsara izay mpampiasa mavitrika no mampiasa fampiharana izany eto.
I atao ihany koa ny mahita asa sy ny Microsoft mailaka asa Teams jereo ity tatitra eto aoka hojerentsika bebe kokoa ary aoka ny horonan-taratasy teo, izany no mahita izay rehetra amin'ny usernames sy hitako vao haingana ny asa noho ny asa sasany. Ary eto, raha no fotoana farany ny mpampiasa mpamaky nandefa mailaka, fony no fotoana farany dia nanao zavatra tao OneDrive? , Sa ianao no manao zavatra ao SharePoint, in Skype? Dia eto isika Yammer sy ny asa atao ao amin'ny Microsoft farany Teams, OK izany no fanazavana azontsika amin'ny sehatry ny mpampiasa. Ny fampahalalana hafa dia misy eo amin'ny sehatry ny fikambanana, noho izany dia izao no zahana miaraka amin'ny Microsoft Teams, amin'ny zavatra niainako rehefa miasa miaraka amina ekipa lavitra, dia tsara kokoa hatrany ny manome andraikitra sy tanjona, ohatra amin'ny Planner, fa tsy mikrômanina olona tsirairay ary manara-maso ny ora fiasana.
Raha te-hianatra bebe kokoa momba Planner, jereo ity lahatsoratra ity, izay manome anao feno fampidirana. Manantena aho fa nahita ity lahatsoratra ity fa mahasoa ianao, raha izany, aza adino ny miampita ny ankihiben-tànanao sy misoratra anarana amin'ity fantsona ity raha mbola tsy nisoratra anarana ianao. Misaotra nijery ary ho hitantsika anao ao amin'ny lahatsoratra manaraka. (mozika upbeat)
Ahoana no ahafantaranao raha misy olona amin'ny finday Skype?
RAHAmisy maitso Mariho ny namanao ny anaranao, dia tsy ampy ny mandray antso naSkypehafatra. Ity marika ity dia manondro ny fifandraisanao an-tserasera ary miditraSkype.RAHAhitanao ny rahona maitso misy faribolana fotsy ao, ao anaty resaka ianao izao.13 Sep 2017.
Famantarana mazava dimy ambin'ny folo fa voajirika ny telefaoninao Matetika isika mahita ny finday avo lenta finday toy ny fialofana nomerika azo antoka izay itahirizantsika ny mombamomba antsika manokana. Avy amin'ny sary ny carte de crédit antsipirihany, ny olona sasany na dia hamonjy ny tenimiafina in-tsoratra. Somary be loatra izany, marina, mety nahazo ny hafatrao sy ny mailakao rehetra ianao, ao anatin'izany ny fitaovam-piasana, mifototra na miombona amin'ny telefaonao, raha heverinao fa faritra tsy miankina aminao io dia mety ho diso ianao hatramin'izay tsy misy fitaovana toa izany izay tsy azo hacked mba hampihenana ny mety ho risika hitanay zavatra telo ny fomba fanapahana findainao, ny fomba hamantarana azy ary ny fomba hiarovana ny telefaona anao tsy ho voajirika, andao atombohy amin'ny fanontaniana lehibe voalohany ary jereo ny fomba fikafika azo atao ny telefaoninao. Ny fomba mora indrindra dia ny fakana ny findainao mandritra ny minitra vitsy ary hametahana fampiharana mpitsikilo toy ny Spy Phone Apps Puppies II na Spy era, ireo fampiharana ireo dia mpanaraka finday izay manara-maso ireo antso an-telefaona miditra sy mivoaka ary mirakitra hafatra an-tsoratra.
Ataovy azo antoka ny ray aman-dreny ary ampio ny mpandraharaha hanara-maso ny mpiasany. Na raha ny tena izy dia ampiasain'ireo izay tsy miraharaha ny fiarovana ny hafa ireo fampiharana ireo mihoatra ny tamba-jotra Wi-Fi tsy voaaro ao amin'ny trano fisotroana kafe na seranam-piaramanidina, eny Tsotra be izany fa tianay rehetra ny mahita toerana Wi-Fi maimaimpoana eny amin'ny seranam-piaramanidina. sy trano fisakafoanana, indrindra amin'ny Travel Efa nampiasa Wi-Fi maimaim-poana ve ianao? Tsindrio ankihiben-tànany ka raha manana ny fomba-bahoaka Wi-Fi mba hizara ny fifamoivoizana rehetra amin'ny olona rehetra manodidina anao. Ataovy ao an-tsaina izany amin'ny manaraka ianao te-hijery ao amin'ny toerana iray vahiny.
Tsy ho very maina miandry ambara-pahatratranao kokoa azo antoka networkWhen mamaly ny findainao amin'ny alalan'ny tsy fantatra USB, na dia amin 'ny fiaramanidina na fiara, misy ny mety rehetra ny antontan-kevitra no hiseho, ary nafindra Different finday avo lenta Tsy mitovy fiarovana lafin-javatra, dia tsy ny rehetra amin'izy ireo dia mizara ny habetsaky ny fampahalalana mitovy aminy raha ampifandraisina amin'ny PC Saingy azon'izy ireo atao ny manambara ny anaranao amin'ny laharana maromaro, ny mpanamboatra azy Fampahalalana sy fampahalalana momba ny rafitra sy ID chip elektronika izay fampahalalana marobe izay azo ampiasaina hanohitra anao, SMS phishing mitranga izany rehefa mandefa hafatra miaraka aminao ianao dia hahazo rohy izay milaza fa, ohatra, ny fanambaranao amin'ny banky, famindrana vola na ny sarinao, noho izany tsindrio eo, ampidino ny rakitra, ary ampahafantaro avy eo ny atin'ny telefaona rehetra. ny mpijirika miaraka amin'ny fanampian'ny rafitra ny nidika 7 na SS 7, izay nampiasaina tamin'ny telefaonina ny ankamaroan'ny peo manerana ny worldHackers afaka mamaky ny hafatra, mihaino ny antso an-telefaonina sy haharaka ny finday toerana s, fa raha tsy olo-malaza ianao dia tsy mila manahy, azonao atao ny mahita fa misy fomba maro hanafihan'ireo mpijirika ny telefaoninao izao no fotoana hamaliana ny fanontaniana. Izahay rehetra dia mieritreritra ny fomba hilazana fa ny telefaoninao dia laharana 15. Afaka mahita fampiharana vaovao amin'ny findainao ianao ary tsy mametraka azy ireo irery indraindray Indraindray ireo mpanamboatra telefaona sy mpanome tolotra dia afaka mametraka apps vaovao amin'ny findainao raha manavao azy ianao, saingy Aleo ianao milamina toy izay miala tsiny, noho izany dia mila maka antoka ianao fa tena misy ny apps azonao atao ny mikaroka azy ireo ao amin'ny Google ary mahita izay lazain'ny mpampiasa hafa na tranokala azo itokisana tsara kokoa momba ireo fampiharana, na tsy ny mpanamboatra na ianao no nametraka ilay app, tsy maintsy mpijirika, mandeha toa ny taloha izy io ary raha fampiharana vaovao mbola tsy napetrakao akory Mba hiasa tsara amin'ny findainao, manana olana ireo fampiharana taloha.
Misy zavatra manelingelina ny fiasan'izy ireo mety ary azo inoana fa malware eo amin'ny telefaonanao laharana faha-13, dia lany tampoka ranom-potaka tampoka ny findainao rehefa hitanao fa fohy loatra ny androm-batterin'ny findainao. Tsy maintsy misy ny antony, mety hitranga izany rehefa misy fampiharana tsy mahazatra mandeha amin'ny findainao, fampiharana toy izany na amin'ny maody any aoriana tsy misy fampandrenesana, noho izany tsy mila mandefa azy ireo akory ianao, fa mbola mandray ny herin'ny telefaona 12 anao , ny findainao smartphone dia toa miadana kokoa noho ny eritreretintsika matetika fa ny hafainganam-pandeha miadana kokoa no antony antitra finday? Tahaka fohy bateria fiainana, dia mety ho vokatry ny malware mihazakazaka eo aoriana amin'ny findainao, ireo ratsy Apps dia nafindrany tahirin-kevitra avy amin'ny finday, noho izany dia toy ny fampisehoana latsaka ratsy smartphone dia marani-tsaina, fa ny mpijirika no dia mahay indraindray, isa 11, na ny telefaonina finday mahazo warmYour mahazo mafana ianao na dia tsy an-telefaonina, na miasa eo aminy angamba ianao zatra ny fahatsapana feno fitiavana mikasika ny fifandraisana fitaovana, ary mety na dia izay toy izany ihany, indrindra rehefa mahazo mangatsiaka, fa namindro ho tsy misy antony dia tsy tsara famantarana na eto dia midika izany fa misy ny sasany tsy fantatra fampiharana izay miasa ny telefaonina mafy izany heats miakatra, dials isa na ny famoahana fampiharana, dia mety ho tianao ny hino fa tena famerenana na telefaonina isa dia vokatry ny hetsika paranormal vitsivitsy, ary saika hiantsoana Ghostbusters ianao hita ao amin'ireo antso nataonao farany ary vidiny S ieHackers dia afaka mampiasa ny fitaovanao hiantsoana antso iraisam-pirenena lafo vidy. Azonao atao koa ny mampiasa ny fitaovanao voa mba hiantsoana amin'ireo orinasa izay manome vola anao ho azy ireo.
Mazava ho azy fa tsy hoe any ivelany ny tenany, fa atero nandoa izany fanompoana ny mpanjifa mba hahafahany mandefa Faha-valo sy mandray hafatra hafahafa tsy mahazatra toy ny isa ao amin'ny antso vao haingana, dia afaka mahita hafatra an-tsoratra izy ireo dia tsy tena alefaso amin'ny telefaoninao izany. Mety hitranga amin'ny mailakao koa izany raha mampiasa azy amin'ny telefaoninao ianao, raha ianao irery dia mety holazain'ny namanao na mpiara-miasa aminao izany raha nahazo hafatra hafahafa izy ireo raha tsy jerenao ny isa fito, tsy ho vitanao ny mamono ny fitaovanao, manandrana mamono ny fitaovanao dia hanokatra fampiharana isan-karazany, hampitombo ny fifaliana sns ... Tena diso izany ary mety tsy ilay mpanamboatra hadisoana enina, misy tabataba na ako nandritra ny antso, raha mandre feo, na ako nandritra ny antso, ka tsy mba nanana azy ireo ao amin'io toerana alohan'ny midika izany fa olon-kafa no mahazo ny finday, dia afaka manara-maso ny finday sy ny resaka eavesdropping browserThis mety ho famantarana fa nisy nametraka malware o N ny phoneIt dia afaka mamaky ny aterineto fifandraisana sy manara-maso ny activityIt mipetraka any ho any eo amin'ny navigateur sy ny aterineto, manakana ny toerana tsy nijery raha ny tokony ho Faha-efatra ianao ambony Cellular Data Usage Detected Raha manana tahirin-kevitra fanaraha-maso fampiharana azonao indraindray ny mahita ny finday tahirin-kevitra fampiasana maniry fomba haingana loatra, dia mety hiharan'ny fanampiny vola lany raha handoavana ny iray habetsaky ny fifamoivoizana isam-bolana, ary izany no iray amin'ireo famantarana fa ny telefaonina tsy izay avy Azonao atao koa ny miezaka eo amin'ny n Phone Settings hitady fampiasana fifamoivoizana amin'ny app amin'ny antsipiriany.
Izany dia milaza amintsika marina hoe hatraiza finday tahirin-kevitra tsirairay ny fampiharana no mampiasa napetraka vao haingana ity ianao rindrambaiko avy amin'ny loharano vaovao sy ny mihinana ny angona. Tena adala ny fampiharana mety ho malware. Fafao izy ireo.
Faha-telo pop-dehibe hita avy na aiza na aiza eo amin'ny fitaovana ianao, dia azo inoana fa hahita izany eo amin'ny solosaina betsaka, raha tsy ianao. Ampiasao tsara anti-otrik'aretina rindrambaiko ary dia mampahafantatra anao fa vao nahazo ny loteria, na nahazo vaovao iPhone. Ny sisa ataonao dia tsindrio bokotra iray ary anao izany.
Ny pop-up toy izany amin'ny findainao dia azo inoana fa vokatry ny malware. Tsy manao izay asainy ataonao izy ireo. Ny laharana 2 mailaka nalefa tamin'ny findainao dia nosakanan'ny sivana Spam, mety hotendrena hanana antoko fahatelo hamaky ny mailaka anao Ahoana ny hoe raha mifehy ny telefaoninao izy ireo? Mety nanova ny fikirakirana mailakao izany handefasana ny mailakao rehetra amin'ny alàlan'ny hackers mpizara tsy nahazoana alalana sasany, mety manana fidirana mivantana amin'io laharana mpizara io ianao, tsy afaka miantso ianao na hoesorina izy ireo Raha mahita antso mampihena ny tsy fahafaha-manao ianao, Manao antso rehefa mihetsika ny famantarana anao tsara ny tanjaka na misy tabataba hafahafa mandritra ny antso an-tarobinao Misy zavatra mety tsy nety. Matetika, ireo olana ireo dia manondro ireo olana ara-teknika tsy misy ifandraisany amin'ny fandikan-dalàna, fa tsy izany foana no tsapanao fohifohy ireo soritr'aretina ireo rehefa avy nahatsikaritra hetsika iray izay neninao izao, dia dia hevitra tsara ny mandinika na tsia dia ilaina ny handray fepetra fanitsiana raha mahita ireo famantarana eo amin'ny finday? Andramo mihazakazaka rindrambaiko finday manohitra ny malware.
Fafao izay fampiharana tsy napetrakao sy tsy azo atokisana fampiharana izay mandany fifamoivoizana be loatra, raha azo atao, azonao atao koa ny mamerina ny telefaoninao ary miverina any amin'ny toerana nisy azy tany am-boalohany, raha tsy ampy ho anao izany dia mifandraisa amina matihanina fantatsika rehetra fa tsara kokoa ny fisorohana noho ny fanasitranana, ka izao no azonao atao hiarovana ny findainao amin'ny hackers raha mahazo hafatra misy rohy ianao ary tsy mahita ny url feno, aza sokafana mihitsy rehefa mameno finday amin'ny solosaina tsy mahazatra ianao, rehefa mifandray, mamaly ny onlyDon't mifidy afa-mampiasa ny tenimiafina mampiseho vonoy fifandraisana mandeha ho azy ny Wi-Fi ho an'ny besinimaro fa tsy mifidy tambajotra tanana iray izany zavatra bebe kokoa momba ny tambajotra Wi-Fi tsy mampiahiahy tambajotra amin'ny anarana toy ny aterineto maimaim-poana na ny Wi-Fi freeSelect ireo amin'ny Voaro ny tenimiafina indrindra raha any amin'ny trano fisotroana kafe ianao Tsy misy fividianana Internet na famindrana vola amin'ny tamba-jotra Wi-Fi ampahibemasoRaha mampiasa Android ianao, mametraha antivirus azo antoka ary mazava ho azy manampy teny miafina amin'ny telefaoninao Manantena izahay fa vaovao ianao ND ilaina amin'ity lahatsoratra ity, raha toa izany, dia omeo azy ho ankihiben-tànany izy, Foana ny Phone Azo Antoka NowYou mahalala ToSubscribe ho an'ny fantsona ka tsy manadino fanavaozam-baovao
Inona no manao ny loko amin'ny Skype sata holazaina?
Inona ve ny Skype Status Colors dikan'izany? 1 Inona no dikan'ireo loko misy ny Skype? # 1. Ny teboka volomboasary dia manondro hafatra tsy voavaky amin'ny fifandraisana. ... 2 A misy dikany ny bokotra maitso antso lahatsary dia midika hoe ny fifandraisana ivelany, na dia voalaza fa tsy hita maso. ... 3 Ny mavo kisary afa-tsy ny mpifandray 'ny mpifandray anarana midika hoe, mametraka ny satany ho 'lasa'. ...
Inona no dikan'ny iray manokana rehefa niditra voalohany tao amin'ny Skype ianao?
Midika izany ny famaritana iray mahazatra anao rehefa miditra amin'ny Skype voalohany ianao. Ny fifandraisana dia afaka mahita fa ianao ary afaka mifandray amin'ny Internet anao. Instant hafatra hatolotra ho anareo niaraka tamin'izay https: //support.skype.com/en/faq/FA34699/what-a ... i hamaly izany mahasoa? Miala tsiny fa tsy nanampy izany. Tsara! Misaotra tamin'ny hevitrao.
Inona no dikan'ity kisary Skype ity amin'ny ekipa rehefa mandefa hafatra amin'ny My?
Ny mpampiasa Teams sy ny mpampiasa Skype dia afaka mifampita hafatra raha toa izy ireo ao anatin'ny vondron'orinasa mitovy (federasiona na inona ny teny). Ny sary famantarana Skype dia midika hoe mampiasa Skype ny Rainao. Raha ny hafatra tsy natolony, izay midika hoe ny orinasa dia tsy anisan'ny vondrona iray ihany.
Karazana emoji inona no ampiasainao amin'ny Skype?
Skype dia manana andiana emoji-tahaka emoji izay manana ny endrik'izy ireo manokana. Misy sombin-tsary emoticons Skype hita ao amin'ny Microsoft Teams. Ny napetraka Skype emoticon dia tsy mitovy amin'ny emoji napetraka amin'ny orinasan-dray aman-dreny Microsoft, izay ampiasaina amin'ny endritsoratra emoji manerana ny Windows 10.